Seychelles - Coral Restoration | Reef Resilience
Seychelles - Coral Restoration
Enga anie 10, 2016
Cousin Island Reserve, Seychelles
Tamin'ny taona 1998, ny hetsika fanalefahana haran-dranomasina marobe, nateraky ny fiarahan'ny El Nino sy ny ranomasimbe Dipole, dia nisy fiantraikany lehibe tamin'ny haran-dranomasina Seychelles Archipelago. Ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny 1998 dia nampihena ny rakotra fianjerana velona hatramin'ny 97% tany amin'ny faritra sasany ary nahatonga ny haran-dranomasina maro nanerana ireo nosy nianjera tamin'ny fako (izay nanjary rakotra ahidrano). Tao anatin'izay am-polony taona lasa izay, ny fanarenana vatohara dia somary niadana be tany amin'ireo nosy granitin'i Seychelles. Na eo aza ny fari-dranomasina marobe tsy azo alaina (MPA) - fitaovana mahomby hanamafisana ny fanarenana ny haran-dranomasina - naharitra efa ho 20 taona ny fahitana ny rakotra vatohara tamin'ny ambaratonga talohan'ny 1998 tany amin'ny ankamaroan'ny faritra ao amin'ny faritra. Noho ny fandrahonana mitohy manerantany, toy ny fiovan'ny toetr'andro sy ny simia amin'ny ranomasina, ny MPA fotsiny dia mety tsy ho ampy hanampiana amin'ny famerenana ireo haran-dranomasina any Seychelles. Vokatr'izany dia ilaina ny paikady fitahirizana mavitrika kokoa hampiroboroboana ny fanarenana ny haran-dranomasina sy hananganana fiaretana ny haran-dranomasina ary hahatratrarana ny fitehirizana maharitra ny serivisy momba ny tontolo iainana haran-dranomasina.
Toerana famindrana haran-dranomasina ao amin'ny Cousin Island Special Reserve. Sary © Reef Rescuers
Ny fanarenana ny fahaleovan-tena miverimberina dia nanosika ny ezaka famerenana amin'ny famerenana an-tsokosoko tany amin'ireo nosy anatiny ao amin'ny vondronosy Seychelles mba hanampy amin'ny fanarenana voajanahary. Tao amin'ny 2010, natsangan'ny Nature Seychelles ny tetikasa Reef Rescuers amin'ny nosy Praslin. Ny tetik'asa fanarenana ny toeram-piarovana amin'ny toetr'andro dia mikendry ny hanamboatra ny simenitra amin'ny fanimbana ny haran-tany amin'ny toerana voafantina manodidina ny Praslin sy ny Cousin, izay manohana ara-bola avy amin'ny Masoivoho Amerikana ho an'ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (USAID) sy ny Global Environment Facility (GEF) amin'ny alalan'ny Programme des Nations Unies (UNDP). Ny Special Reserve Reserve (Island Special Reserve), tsy misy maripana an-dranomasina.
Manadio ny vatany Sary © Reef Rescuers
Amin'ny alalan'ity tetikasa ity dia manaparitaka ny tetikasa famerenana amin'ny sehatr'asa lehibe ao amin'ny faritra misy ny haran-dranomasina izahay amin'ny fampiasana 'fambolena karajia', teknika iray mikasika ny fanangonana sombin-tsakafo maromaro, hampiakatra azy ireo any anaty trano famakiam-bokin-drano ambanin'ny tany ary avy eo dia mamindra azy ireo any amin'ireo tranonkala manimba no voakasik'izany. Tendrombohitra valo ambiny folo avy amin'ny karazam-borona 10 samihafa (Acropora hyacinthus, A. cytherea, A. abrotanoides, A. appressa, Pocillopora damicornis, P. grandis - zokiolona mitovy amin'ny P. eydouxi, P. meandrina, P. verrucosa, Stylophora pistillata, S. subseriata; karazana karazana taorian'ny veron 2000 sy nomena anarana taorian'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy rejisitry ny karazan-javamaniry an-dranomasina) dia navoaka tao amin'ny 13 ambanivohitr 'i ambanivohitr' i Cousin Special Reserve. Teo anelanelan'ny volana 2011 sy 2014 tamin'ny volana 24,431, dia niorina tamin'ny 5,225 m ny isan'ny mpanjono XNUMX niorina2 (0.52 ha) ao amin'ny vatohara simba ao amin'ny Cousin Special Reserve.
Ny zanatany ny vatany. Sary © Reef Rescuers
Tamin'ny fanombohan'ny hetsika mahery vaika El Niño-Southern Oscillation (ENSO) izay manomboka amin'ny fararano amin'ny fahavaratra ka hatramin'ny fiandohan'ny 2014 ary mitohy amin'ny 2016, dia nanana fahafahana manokana izahay hamaritana ny fahombiazan'ny safidin'ny karazana vatohara (voalohany voafidy miorina amin'ny taham-pahavelomana mandritra ny ranomandry amidy farany) sy ny dingana famerenana amin'ny laoniny amin'ny fampivoarana ny fiantraikan'ny fiakaran'ny hafanan'ny ranomasina. Mampiasa ny mari-pahaizana nomerika izahay mba hanaraha-maso ny fahavelomana, ny famerenana, ny fandraisana mpiasa ary ny valin-kafatry ny mpanolotra sy ny mpanjanaka. Manohy manara-maso ny tranonkala fitsaboana sy toeram-piarovana roa izahay, misolo tena ny vatohara ho an'ny haran-dranomasina mahasalama. Ny fanaraha-maso toy izany dia ahafahantsika manombana ny fahombiazan'ny ezaka famerenana amin'ny laoniny. Ankoatra izany, isika dia maminavina ny fandaniana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fambolena karaoke sy ny fizotran'ny teknolojia famerenana ny haran-dranomasina.
Ny "fahombiazana" lavitr'ezaka lavitr'ezaka dia maharitra hatramin'izao saingy efa nahazo vokatra tsara ny tetikasa. Mpitsabo efa-polo avy amin'ny firenena 11 no niharan'ny teknika famerenana amin'ny akorabato amin'ny alalan'ny "asa an-tselika" ho mpiasa an-tsitrapo hatramin'ny telo volana an-tranomaizina, ary manam-pahaizana valo no efa nampiofanina efa hatramin'ny enim-bolana. . Ny fampitahàna mialoha sy ny toetr'andro eo amin'ny fononteny coral teo amin'ny tranonkala voatsinjara dia nampiseho fa ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny dia nitombo ny fampidinana ny harin-karena 700, hatramin'ny 2% amin'ny 2012 ka hatramin'ny 16% amin'ny faran'ny 2014. Tahaka izany ihany koa, efa navoakanay ny fitomboan'ny karazan-trondro amin'ny karazan-trondro, avo telo heny amin'ny haavon'ny trondro, ary avo roa heny ny fikarakarana ny vatohara sy ny fandraisana mpiasa ao amin'ny tranonkala mihodina. Hitantsika ihany koa fa ny valan-javamaniry dia mamaly tsara kokoa amin'ny toe-javatra mampikorontan-tsaina vokatry ny fitomboan'ny hafanana ny ranomasina ary ny voninkazo mahatsiravina. Ny vatohara lavareny dia toa miha haingana kokoa sy tsara kokoa noho ny vatohara any amin'ny toerana hafa. Ny fanaraha-maso ny harambaton'izy ireo amin'ny fiakaran'ny hafanana mangatsiaka dia mbola tohanana. Ny fanadihadiana mialoha momba ny fitrandrahana amin'ny fitrandrahana ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fambolena haran-koditra sy ny fizotry ny teknolojia famerenana amin'ny haran-dranomasina miaraka amin'ny vokatra ara-tontolo iainana hatreto dia manohana ny fampiharana ireo tetikasa famerenana amin'ny harena lehibe amin'ny siansa matanjaka amin'ny siansa, ny vatohara simba. Ny tolo-kevitra hanatsarana ny toeram-pambolena ho an'ny fanangonam-bary mba hampihenana ny fandaniana amin'ny alàlan'ny toekarena dia neken'ny governemanta Seychelles ary ny famatsiam-bola ankehitriny dia notadiavina.
Ny manaterana sombin-dranomasina. Sary © Reef Rescuers
Misy kitapo an-tserasera napetraka amin'izao fotoana izao mba hanasongadinana ny lesona azo avy amin'ny tetikasa. Raha ny famintinana dia fantatsika fa:
Ny faharetan'ny mpanjanaka mpanangom-bokatra dia avo.
Ny fipetrak'ireo zanatany kamboty dia ambony noho ireo karazana voatanisa voalaza etsy ambony.
Misy karazana haran-koditra (karazana fahafaha-manararaotra) voajanahary amin'ny sehatry ny garderie ary manala ny filàna ny famerenana amin'ny famolavolana ny zana-ketsa-zana-boary na mpanangom-bokatra.
Ny toeram-pambolena dia lasa fiompiana ranomandry momba ny haran-dranomasina.
Ny fikojakojana ny harena voajanahary sy ny haran-dranomasina dia mampihena ny fiarovana ny zana-ketsa ary mampitombo ny fahombiazan'ny fambolena.
Misy ny fiantraikany amin'ny fikajiana tsara amin'ny famerenana sy famerenana ny vatohara vaovao, ny fahasamihafan'ny trondro sy ny hafanana.
Ny valin-ketsa hodiavina miketrika amin'ny fanakona ny hetsika dia mila fanaraha-maso akaiky mba hanombanana ny vokatry ny fambolena amin'ny haran-dranomasina amin'ny fanoherana ny fanamafisana ny fanamiana.
Misy ny fahalianan'ny olom-pirenena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny fandefasana fiofanana momba ny famerenana indray ny vatohara.
Ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny sehatry ny fizahantany dia azo atao mba hananganana zaridana saha (seascaping) ho toy ny fanintonana vahiny ary ho toy ny ampahany manan-danja amin'ny programa momba ny tontolo iainana momba ny tontolo iainana sy ny Corporate Social Responsibility (CSR).
Ny famerenana amin'ny laoniny ho an'ny haran-dranomasina lehibe dia tokony ho raisina ho toy ny fitaovana mahomby mety hampidirina ao amin'ny tobin'ny fitaovana MPA.
Hatramin'ny 2015, ny volam-bola hanohanana ny tetikasa Reef Rescuers dia natolotra sy nomena misokatra amin'ny varavarankely vaovaoUSAID. Fanohanana ara-bola fanampiny no voaray teo ambanin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoGovernemantan'ny Sehiben'ny Tontolo Iainana any Seychelles (GEF) -n'ny tetikasa Fampandrosoana ny Firenena Mikambana (UNDP) in 2011.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNature Seychelles
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoGlobal Environment Facilitaty (GEF)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoUSAID
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMomba ny tetikasa Reef Rescuers
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy haran-dranomandry niparitaka dia tafiditra ao anatin'ny tetikasam-piofanana ho an'ny fantsom-piofanana an-dranomasina ao Seychelles
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMpanamboatra Reef teo amin'ny CNN Inside Africa
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMidera ny asan'ny Seychelles ny US Oceans Envoy
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamonjena ireo gilasy goavam-be